lycée ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် သင်ကြားပြသပေးသည်။ အိုင်တီအခြေခံများ အရေးကြီးသောနေရာကိုယူသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အထွေထွေနည်းပညာ Seconde မှ သင်ကြားမှုအသစ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ အားလုံးအတွက် ရနိုင်ပါသည်။
SNT ဆရာတွေကို ဘယ်လိုကူညီမလဲ။ သူတို့အတွက် ဘာဗဟုသုတတွေ မျှဝေရမလဲ။ ဘယ်အရင်းအမြစ်တွေကို ရွေးမလဲ။ ဒီပညာရေးသစ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင် ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ပေးသင့်လဲ။
ဤ MOOC ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထူးလေ့ကျင့်ရေးကိရိယာတစ်ခု :aspace of မျှဝေခြင်း နှင့် D 'အပြန်အလှန်ကူညီမှုလူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့် အသိပညာများနှင့်အညီ ၎င်းတို့၏သင်တန်းကို တည်ဆောက်ကြမည်ဖြစ်ပြီး၊ အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲလာမည့် အွန်လိုင်းသင်တန်း၊ ငါတို့လိုချင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီး လိုအပ်သလောက်ပြန်လာခဲ့ပါ။
ဒီသင်တန်းက ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်အတူ ဤ SNT လှုပ်ရှားမှုများစတင်ရန် ကြိုတင်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကနဦးအရင်းအမြစ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါ။ ပရိုဂရမ်၏ခေါင်းစဉ်7ခုနှင့်ဆက်စပ်။ နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာနိုင်သော ဘာသာရပ်အနည်းငယ်တွင် အနီးကပ်ရိုက်ချက်များနှင့် အလှည့်ကျလုပ်ဆောင်မှုများကို ကမ်းလှမ်းပါမည်။ ဤ MOOC သည် အမျိုးသားပညာရေးစနစ်မှ ပေးအပ်သော ဤပညာရေးအတွက် လိုအပ်သော လေ့ကျင့်မှုများကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရောက်ရှိလာပါသည်။
S for Science: ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် ၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်များကို သိပါ။. ဒေတာလုပ်ဆောင်ခြင်း၏အသုံးပြုမှုကိုလူတိုင်းနီးပါးသိကြသည့်ယူဆချက် (နှစ်အနည်းငယ်ကြာမှ) ဤနေရာမှအစပြု၍ အချက်အလက်များ၏ကုဒ်နံပါတ်များ၊ အယ်လဂိုရီသမ်များနှင့် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်များ (ကွန်ရက်များ၊ ဒေတာဘေ့စ်များ) များအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဘာသိကြသနည်း။ မင်းဘာမှမသိဘူး ဒါမှမဟုတ် အကုန်သိတယ်ထင်လား။ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြည့်ရှုပြီး မည်မျှသုံးစွဲနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။
N for Digital- ဒစ်ဂျစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်၊ လက်တွေ့တွင်သက်ရောက်မှုများ. ပရိုဂရမ်၏ ခေါင်းစဉ်ခုနစ်ခုတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့် ၎င်း၏သိပ္ပံပညာများကို လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် သိပ္ပံနည်းကျ ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစေ့များ။ လူငယ်များ၏နေ့စဉ်ဘဝနှင့်ဆက်စပ်၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဝန်းရံထားသည့် ဒေတာနှင့် အယ်လဂိုရီသမ်များသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း၊ ၎င်းတို့အတိအကျကို ၎င်းတို့အား ပြသပါ။ ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့ရှေ့တွင်ရှိသော အခွင့်အလမ်းများနှင့် အန္တရာယ်များ (ဥပမာ- လူစုလူဝေးရှာဖွေခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအသစ်များ စသည်) တို့ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ၎င်းတို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အပြောင်းအလဲများနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို နားလည်ပါ။
ဖတ်ရန် ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်၊ စုပေါင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှု - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရွေ့လျားမှုအတွက်ကိရိယာအသစ် Transco ဆိုသည်မှာ ၀ န်ထမ်းများအားစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကဏ္inများတွင်အလုပ်များသည့်အခါဖွံ့ဖြိုးဆဲလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောစက်ဖြစ်သည်။
နည်းပညာအတွက် T- ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်တီးမှုကိရိယာများကို ထိန်းချုပ်ပါ။. ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် Python တွင် စတင်လုပ်ဆောင်သည့် ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်အရာဝတ္ထုများ (အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ချိတ်ဆက်ထားသော အရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် စက်ရုပ်များ၊ စမတ်ဖုန်းအပလီကေးရှင်းများ စသည်ဖြင့်) ပစ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ကျောင်းသားများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ပေးရန်။
ICN MOOC ကို ယူရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
သတိပြုရန်- ဤ SNT MOOC ၏ အပိုင်း S သည် ICN MOOC ၏ အခန်း I (IT နှင့် ၎င်း၏အခြေခံများ) ကို ယူဆောင်သည် (ထို့ကြောင့် သင်သည် ဗီဒီယိုများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ထပ်၍မတိုင်ပင်ဘဲ ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများကို တရားဝင်အောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်)။ MOOC ICN ၏ အခန်း N ၏ အကြောင်းအရာများကို MOOC SNT ၏ အပိုင်း N တွင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဒြပ်စင်များအဖြစ် အသုံးပြုထားသော်လည်း အသစ်ဖြစ်ပြီး MOOC SNT ၏ အပိုင်း T ကဲ့သို့ ပရိုဂရမ်အသစ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော MOOC SNT ၏ အပိုင်း N တွင် အသုံးပြုထားသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်ကြားမှုအကြောင်း လေ့လာပါ။ ဒီဇင်ဘာလ 13, 2021Tranquillus
အောက်ပါအဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင် ကောင်းမွန်စွာ စတင်နိုင်ရန် အထွေထွေ ရူပဗေဒ